Mitondra Fanantenana Ho Fiarovana ny Hazara Ny Filazana Nataon’ny Lehiben’ny Fitsaràna ao Pakistàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2018 5:08 GMT
Fiaretantory nitondràna labozia ho fahatsiarovana ireo niharam-boina tamin'ny herisetra ara-pivavahana tao Pakistana. Sary tao amin'ny Flickr an'i Daniel Schmidt. CC BY 2.0
Volana iray manokana matroka ny Aprily ho an'ny foko Hazara, vondrom-piarahamonina tratry ny fahirano tao amin'ny tanànan'i Quetta ao Pakistàna.
Nanomboka tamin'ny fanaovana lasibatra namonoana an'i Nazar Hussein izy io, lehilahy iray mpamily fiarakaretsaka tao an-tanàna. Tany am-piafaran'ny volana, lehilahy roa Hazara no maty voatifitra tao amin'ny trano fivarotan'izy ireo kojakoja elektroknika, fanafihana iray hafa natosiky ny lojikam-pivavahana. Fitambarany, nozakain'ilay vondrom-piarahamonina nandritra iny volana iny ireo fanafihana efatra samihafa “nikendrena hamonoana”. Niteraka hetsipanoherana maro ireo famonoana ireo, namamarika indrindra izany ny fitokonana tsy hanendry sakafo notarihan'ireo vehivavy, fitokonana izay natsahatra rehefa nahazo antoka ireo mpitokona fa hihaona amin'ny Qamar Javaid Bajwa, lehiben'ny etamazaoron'ny tafika.
Vakio misimisy kokoa: Vehivavy Hazara nampiato ny fitokonany tsy hanendry sakafo ho fanoherana ireo fanaovana lasibatra amin'ny famonoana (Ang)
Rehefa raisina io fototra io, tena manandanja ary tonga tao anatin'ny fotoana mahamety azy tokoa sy noarahabain'ny rehetra tao anatin'ilay vondrom-piarahamonina ilay fanapahankevitry ny Lehiben'ny Fitsaràna ao Pakistàna hamoaka tamin'ny sainy sy ny fanahiny manokana (feno fandanjalanjàna) ny naoty iray momba ireny vono olona ireny.
Tamin'ny 11 May, nilaza ny Lehiben'ny Fitsaràna Mian Saqib Nisar fa azo alahatra ho “famongorana foko” ireny famonoana ireny.
“Tsy misy teny azontsika hanamelohana ny famonoana ireo Hazaras,” hoy i Nisar, talohan'ny nanampiany hoe: “Tsy maintsy arovantsika ny aina sy ny fanànan'ny [olona ao anatin'ny] vondrom-piarahamonina Hazara.”
Ankasitrahana ny naoty feno fandanjalanjàna navoakan'ny CPJ momba ny fanaovana lasibatra namonoana ny vondrom-piarahamonina Hazara tao Quetta
Heno ihany no niafaran'ny feon'ìreo vahoaka Hazara. Manome tokim-piarovana sy fahatoniana ho azy ireo ny lehiben'ny tafika. Raha ny lehiben'ny fitsaràna ao Pakistàna kosa namoaka naoty momba ny famonoana ny vahoaka Hazara. Taona maro no lanintsika. Faran'izay mahamenatra tokoa.
Hisy zavatra hiova va re?
Ny naoty avy amin'ny Lehiben'ny Fitsaràna dia midika fa ireo manampahefana isan-tsokajiny ao Balochistan, faritra atsinanan'i Pakistàna, toerana misy an'i Quetta, dia tokony handefa tatitra momba ireo vono olona ireo ho any amin'ny fitsaràna.
Tsy mbola mazava aloha hatreto raha toa ka hitondra ho aminà fiovàna miabo izy ity. Narefo foana hatrizay ny fifehezan'ny governemanta foibe ny tao Balochistan. Toy izany koa ny finiavana politika hiaro ireo vahoaka Hazara.
Nandritra ireo 15 taona lasa, nisy fanafihana 190 namoizana aina Hazara 1.500, ary nandratra 3.500 tao anatina fanentanana tsy nitsahatra hanaovana lasibatra aminà fanafihana sy fanapoahana baomba nanerana an'i Balochistan, araka ny lazain'ny Daily Times. Tamin'ny Janoary 2013, ny fanaovana vy very ny aina hahafaty be indrindra sy nanapoahana baomba namelezana ireo Hazaras, 96 no maty tao amin'ny klioba iray filalaovana ‘billard’. Volana iray taty aoriana, 84 ireo olona maty tamin'ny fanafihana tsena iray fivarotana legioma rakotra olona sy tena falehan'ny foko Hazaras. Maty novonoina tany amin'ny maoske, tsena, kliobanà ‘billard’, tena an'arabe, tanaty trano fivarotana ary teny rehetra teny ry zareo.
Nanery ilay vondrom.piarahamonina hipetraka aminà toerana roa faran'izay tsara aro any amin'ny sisiny iray ao an-tanàna ireny andiana fanapoahana baomba, fanafihana fanaovana vy very ny aina, sy famonoana ikendrena manokana ireny: ao Hazara Town sy Mari Abad. Ny Human Rights Watch dia mampitovy ity fironana ity amin'ny fananganana “ghetto” tao anatin'ny tatitra Jona 2014 navoakany, nampiany hoe ‘tsy misy làlana fiampitàna, na tsena, na sekoly, na fifanakalozana asa azo antoka.’
Noho ny tahotra hisian'ny habibiana bebe kokoa sy miaraka amin'ireo fanantenana kely ao amin'ny firenena, 70.000 amin'ireo Hazaras 900.000 voalaza fa monina ao Balochistan no niditra taminà karazana zotra fifindramonina tsizarizary, manantena hahita fiainana azo antoka sy tsara kokoa.
An'aliny no dobo an-drano teny an-dàlana nandritra ireo dia niampitàna ranomasimbe ho any Aostralia.
Lashkar-e Jhangvi, vondrona Siônita Deobandi mahery fihetsika, niaraka tamin'ny Pakistan Tehrek-e Taliban (TTP) Jaishul Islam ary ny Sepeh-e Muhammad, no nilaza ho tomponandraikitra tamin'ny ankamaroan'ireo fanafihana ny Hazaras tao Balochistan. Tato anatin'ny taona vitsivitsy, ilay antsoina hoe Fanjakana Islamika ao Khorasan (IS-K) koa dia nanomboka nilaza ho tomponandraikitra tamin'ireo fanafihana.
Ho an'ireny vondrona ireny, dia ny fahabetsahan'ny fidiran'ireo Hazaras ao amin'ny Silamo Siita no tena manamarika azy ireo ho mpanaraka hevidiso mendrika ny horinganina.
Efa teo nanomboka tamin'ny 1880 ny vondrom-piarahamonina Hazara ao Pakistàna, taorian'ny fifindràny avy any Afganistàna tsy lavitra eo.
Tsy dia tafita nankaiza ireo Hazara tavela any amin'ny fireneny fahiny. Nanomboka ny 2015, ilay lazaina fa Fanjakana Islamika ao Khorasan (IS-K) dia nanatanteraka, raha kely indrindra, fanafihana goavana niisa 19 namelezany ireo Hazaras, nahafaty 544 ary naharatràna maherin'ny 1000. Tany am-boalohany ilay vondrom-piarahamonina dia efa lasibatry ny Talibàna, izay ny foko Pashtun sy ireo mpankahàla Siita no tena betsaka ao anatiny.
Naleon'ny governemanta tao Kabul nifehy tena tsy hanao afa-tsy “ny nanameloka tamin'ny teny mahery” ireo fanafihana tahàka ireny, raha toa ka nahofahofan'ny tatitra iray vao haingana navoakan'ny departemantam-panjakàna amerikàna kosa ny fanavakavahana ataon'ny governemanta amin'ireo Hazara, indrindra fa amin'ny resaka fanabeazana sy fampanànana asa.
Miaraka amin'ny fitomboana toa tsy hay tohaina amin'ny isan'ireo andian-tafika ara-pivavahana, hàka karazana hery sy finiavana izay tsy mbola hita tao Kabul sy Islamabad hatramin'izay ny fiarovana ny zon'ireo Hazara.